တရုတ် Nico စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Inshare
ဖော်ပြချက်: တစ်ခါသုံး vape ကလောင်
ဘက်ထရီစွမ်းရည်: Built-in 280 mAh ဘက်ထရီ lithum ဘက်ထရီ
Puff: 300 ခန့် puff (အဆိုအရ တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုမှု) မှ
နည်းလမ်းအားသွင်း: တစ်ခါသုံး, အသုံးပြု. ပြီးနောက်ပစ်
Vape ကလောင်အလေးချိန်: 15.4g
Vape အရွယ်အစား: 94,4 * 15.5 * 6.5 မီလီမီတာ
MOQ: 100 အစုံ, OEM / လိမ္မော်ရောင်အမိန့် 1000 စုံကိုမလိုအပ်
အီး, RoHS: Certificate
CBD သို့မဟုတ် E-ဖျော်ရည်အသစ်တစ်ခါသုံးဗလာဟာ့ဒ်ဝဲ vape ကလောင်
Nico တစ်ခါသုံး Vape ကလောင်ညွှန်ကြားချက်
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: ဒီလူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်း, မျက်နှာပြင်စတစ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အတူစတစ်ကာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ, ပြားချပ်ချပ်တစ်ခါသုံး vape ကလောင်သစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
တက် Pick နှင့်စို့လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ။
CBD & E-ဖျော်ရည်ခွံ: အဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့စွမ်းရည် 1.2ml ခန့် 280 Puff ။ ဒါဟာအစားထိုးမရနိုငျသောတစ်ခါသုံးခွံဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီ: Built-in 280mAh ဘက်ထရီကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်ကပစ်, အားသွင်းဖို့တစ်ခါသုံးသုံးပြီးအဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။
Nico တစ်ခါသုံး Vape ကလောင် Specification
ကုန်ပစ္စည်းအမည်အား & မော်ဒယ်
အဘယ်သူမျှမ screen ကိုခင်းကျင်းပြသ
CBD & E-ဖျော်ရည်များအတွက် 1.2 ml ကို
(အမြင့်) 94.0 * (အကျယ်) 15.5 * (အထူ) 6.5mm
280 (Built-in ဘက်ထရီစွမ်းရည် 280mAH)
T / T, L ကို A / C, Paypal
အဘယ်ကြောင့် inshare Choose?
ကျွန်ုပ်တို့၏ R & D ရေးအဖွဲ့
1. ပြည့်စုံ R & D အဖွဲ့သည်ဖူး: MD အင်ဂျင်နီယာများ, အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများ, ID ကိုအင်ဂျင်နီယာများ, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ, ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏ OEM / လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကြိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
2. သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေကို: 10 တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်က e-စီးကရက်၏ 100 ကျော်နှင့်ပတ်သက်သည့်မူပိုင်ခွင့်။
3. ကျနော်တို့ပူးပေါင်းနှင့်ဆက်သွယ် e-စီးကရက်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာနှင့်ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောဒေသများအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ဖောက်သည်များကအဆိုပြုထားစိတ်ကူးသည်နှင့်အညီလိုအပ်သောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ယခင်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ် မှစ. , အလယ်တန်းမှိုဖှံ့ဖွိုးတိုးဒီဇိုင်း, နောက်ပိုင်းနမူနာစမ်းသပ်ဖို့, ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်စျေးကွက်၏အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဆိုးကျိုးများနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းသေချာစေရန်, အကဲဖြတ်ဖို့လုံလောက်သောဒေတာရှိပါတယ်။
4. ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် configuration: လေဟာနယ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားစက်မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်စမ်းသပ်စက်, ဘက်ထရီအကြောင်းအရာမီတာ, မီးခိုးစမ်းသပ်စက်, ဆားမှုန်ရေမွှားစမ်းသပ်စက်, တုန်ခါမှု tester ။
1. မန်နေဂျာအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ပျမ်းမျှရှိသည်။
2. ညီလာခံ site ကို: 54,000 စတုရန်းပေ၏ထုတ်လုပ်မှု site ကို 2, 10 စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်း။
3. ဖုန်-အခမဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ: 11,000 စတုရန်းပေ 2,5ပရိသလိုင်းများ, 100 န်ထမ်းလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်။
4. Injection ကိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ: 32,000 စတုရန်းပေ 2, 20 ဆေးထိုးတန်ဆာစက်တွေ, CNC / မီးပွားစက်နှင့်အခြားမှိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ။
5. အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ: အော်တိုစတစ်ကာစက်, ရေနံအဆာစက်, လေဆာထွင်းထုစက်, screen ကိုပုံနှိပ်စက်။
ISO9001 ၏ 1. အပြီးအစီးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအောင်လက်မှတ်။
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအတွက် 2. အပြည့်အဝစစ်ဆေးရေးကိရိယာများ: ခုခံ tester, မိုက်ကရိုဖုန်း sensitivity ကို tester, စုတ်ယူခြင်းခုခံ tester, USB မှတ်စမ်းသပ်မှုအားသွင်း။ ထုတ်ကုန်အရည်အချင်းများမှုနှုန်း 99.9% ရောက်ရှိစေရန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ 100% စမ်းသပ်။
3. ပြီးပြည့်စုံသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု, လွတ်လပ်သော IQC စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်, ကုန်ကြမ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း, တင်းကြပ်စွာဝင်လာသောပစ္စည်းများအရည်အသွေးပြည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန် AQL1.0 စံနှင့်အညီအဝင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်။
4. ကာလအပိုင်းအခြားကုန်ကြမ်း RoHS စမ်းသပ်ခြင်းအဖြစ်တစ်ဦးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် RoHS အားလုံးဝင်လာသောပစ္စည်းများအီးယူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းသေချာစေရန်သဘောတူညီချက်အာမခံပါသည်။
ထောက်ပံ့ရေး၏အရင်းအမြစ်ကနေနောက်ပိုင်းမှာခြေရာခံဖို့, အရည်အသွေးမူမမှန်သေချာစေရန် 5. ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးမြင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်။
6. E-စီးကရက်ဆေးလိပ်ထုတ်ကုန်အီးယူအီး / RoHS / TPD လက်မှတ်လေပြီ, စချင်းစီဒေသများ၏အရည်အချင်းများလက်မှတ်လုပ်ဖို့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
တစ်ခါသုံး CBD ဟာ့ဒ်ဝဲ
တစ်ခါသုံး CBD ဟာ့ဒ်ဝဲ , E-ဆေးလိပ် , Original Vape Pen, E-ဖျော်ရည်ဟာ့ဒ်ဝဲ , တစ်ခါသုံး E ကိုဆေးလိပ် , CBD ဟာ့ဒ်ဝဲ ,